के दशैँ, के तिहार ! आफन्तबाट टाढिएका भुटानी शरणार्थीहरुको जिवन काहाली लाग्दो बन्दै::Hamrodamak.com
के दशैँ, के तिहार ! आफन्तबाट टाढिएका भुटानी शरणार्थीहरुको जिवन काहाली लाग्दो बन्दै
दशैले छपक्कै छोपिसक्दा नजिकैका गाउँमा दशै को निकै रमाईलो रौनक छ । तर दमकको बेलडाँगी स्थित भुटानी शरणार्थी शिविर भने सुनसान
दमक | पुर्वी नेपालको झापा र मोरङका विभिन्न शिविरहरुमा करिब तिन दशकयता शरणागत भुटानी शरर्णाीहरुको यस वर्षको दँशै पनि खल्लो बनेकोछ ।
तेस्रो देश पूर्नवासशुरु भएयता हाल शिविरमा विभिन्न कारणले परिवार संग विछोडिए छु्टेका शरणार्थीहरुको दशैमा रमाईलो गर्नु भन्दा पनि परिवारको याद दिलाउने र थाक्नलागेको घाउको खाटा उक्काउने गरेको छ । दशैले छपक्कै छोपिसक्दा नजिकैका गाउँमा दशै को निकै रमाईलो रौनक छ । तर दमकको बेलडाँगी स्थित भुटानी शरणार्थी शिविर भने सुनसान प्राय नै छ ।
पुर्नवासका क्रममा परिवारका सदस्य तथा अफन्तहरु तेस्रो देश गएयता बेलडाँगी शिविरका भिम गुरुङका छाप्रोमा दशै आएकै र्छैन । उनिहरुका लागि दशै आउछ केवल विर्सनलागेको ति दिनहरुलाई यादगर गराउन अनि रुवाउन । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रबासी संगठन आइ ओ एम ले सन २००८ देखि भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुर्नवासमा शूरुगरेपछि अहिले एक लाख बढिको संख्याका भुटानी शरणार्थीहरु यूरोपीयन, अष्टे«लिया र अमेरिका लगायतका विभिन्न ८ बटा मुलुकमा पुगेका छन । जसका कारण शिविरमा भएकालाई के दशै के तिहार जस्तै बन्ने गरेका शरणार्थीहरुको दुखेसो छ ।
उनिहरु परिवारका साथमा रहदा शिबिरनै भएपनि राम्रो संग दशैँ मनाउथे तर अहिले भने दशै आउदै गर्दा पिडा मात्र थपिने गरेको शरणार्थी बताउछन् । भुटानी शरणार्थी शिबिर पथरी र दमकमा गरि हाल ७ हजारको हाराहरीमा शरणार्थीहरु अझैपनि रहेकाछन् । ति मध्येपनि केहि अपाङ्ग, अशक्त तथा बृद्ध बृद्धाहरु मात्र बढिछन् ।
आफन्त बाट टाडिएका अनि जिवनको उत्तरार्धमा पुग्नेगरेका शरणार्थीहरुको जिवन दिन दिनै काहाली लाग्दो बन्दै गएको छ ।
शुक्र, कार्तिक २, २०७५ मा प्रकाशित